टिकटकमा मुठी ठोक्काएर गरिबलाई पैसा बाड्ने गिविना मगर: के छ उनको यति ठूलो आयस्रोत ? - TajaKhabarTV
टिकटकमा मुठी ठोक्काएर गरिबलाई पैसा बाड्ने गिविना मगर: के छ उनको यति ठूलो आयस्रोत ?
२०७८, ४ माघ मंगलवार १२:१४ January 18, 2022 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौं । टिकटकमा सेवानै धर्म हो भन्ने मनकारी जो गरीब, दुःखी को साक्षात्कार भगवान भएर निकै भाइरल महान चेली जो हातमा मुठ्ठी पारेर द्ववांग हान्न लगाउदै सडक पेटीमा सुत्ने भोका, गरीब र असक्तलाई खुल्ला मनले सहयोग गर्ने को हुन् त ती युवती ? उनी हुन् गिभिना मगर । पोखरामा बसोबास गर्ने २४ वर्षीया गिभिना पेशागत रूपमा शिक्षिका पनि हुन।
आफ्नो खाली रहेको समयमा उनले टिकटकमा अरुले भन्दा भिन्नै किसिमको भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने गर्छिन। जुन भिडियोमा उनले सडकमा जिवन बिताइरहेका मानिसहरूलाई आर्थिक सहयोग देखि खाने कुरा तथा कपडाहरु दिएर सहयोग गर्छिन् ‌। टिकटकमा धेरै किसिमका भिडियोहरु हेर्न सकिन्छ तर सोसल मिडिया बाट पनि एक किसिमको सहयोग र सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हुन उनी । तर उनको ब्यक्तीबारेमा धेरै कुरा भने बाहिरिएको छैन् ।]